“Tsy hita ny voambolana hoe ‘fandotoana’ ” · Global Voices teny Malagasy
“Tsy hita ny voambolana hoe ‘fandotoana’ ”
Voadika ny 07 Jona 2018 5:12 GMT
Mpikambana ao amin'ny fikambanana El Churo any Quito, Ekoadaoro i Jorge Cano. Ity manaraka ity dia dika an-tsoratra tamin'ny lahatsary momba ny fanadihadiana nataon'i Jorge amin'ny zavon-teny manondro ny voambolana “minería” (fitrandrahana) ao amin'ny tontolo Ekoadaoreana noho ny fanoherana ny tetikasa fitrandrahana harena an-kibon'ny tany marobe miteraka olana ara-tontolo iainana.
Ireo teny mibahan-toerana avy amin'ny lahatsoratra miisa 1.718 izay navoaka teo anelanelan'ny volana Janoary 2017 sy Aprily 2018 milaza ny hoe “minería” (fitrandrahana) ao anatin'ny angona Media Cloud amin'ny seha-pampitam-baovao 2 amin'ny teny Espaniola ao Ekoadaoro. (jereo ny sary lehibe kokoa)
Nisafidy ny teny hoe “fitrandrahana” aho amin'ity fampiasana ity mba hifantohana amin'ity fikarohana nomerika momba ity zavon-teny ity. Tena gaga izahay raha nahita fa mifandray amin'ny teny maromaro ny fitrandrahana, indrindra amin'ny lohahevitra momba ny fampandrosoana, orinasa, toekarena. Mino izahay fa misy voatra matanjaka izay mahita ny toekarena mifandraika amin'ny fitrandrahana.
Araka ny zavon-teny, ahoana ny fomba nanehoana ny “fitrandrahana” ao amin'ny fampitam-baovao?
Ato amin'ity zavon-teny ity, misy teny maromaro mifandraika amin'ny fitrandrahana: fampandrosoana, fifampidinihana, toekarena, orinasa, tombotsoa lehibe, volamena, metaly. Misy ihany koa ny lohahevitry ny politika, lohahevitra iray mifandraika amin'ireo teny rehetra ireo, toy ny fampiasam-bola. Misy teny vitsy mifandraika amin'ny fandotoana, ny tontolo iainana. Tsy hita ireo teny ireo. Mety misy ny teny iray iraisana: ny tontolo iainana, saingy tsy hita ny [teny] “renirano”, tsy hita ny [teny] hoe “rano”, tsy ao ny sasany amin'ireo teny izay ampiasain'ny fikambanana ara-tsosialy mba hitaterana ny tetika anoherana ny fanambakana sy ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany.
Inona avy ireo teny tokony hananan'ny zavon-teny hoe ‘fitrandrahana'?
Tiako ny zavon-teny hampiditra teny maro mifandraika amin'ny vokatry ny fitrandrahana. Tsy hita ny teny hoe “fandotoana”, ny fitaovana izay ampiasaina amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany ihany koa dia tsy voatanisa : vokatra simika, metaly. Ny hita dia ny teny hoe “vondrom-piarahamonina” sy “indizeny”. Ao Ekoadaoro, nisy ny fitsapa-kevi-bahoaka momba ny fitrandrahana tany amin'ireo faritra tena saropady. akaikin'ny toerana an-tanàndehibe, ary koa tany amin'ny faritra toy ny valan-javaboary voaaro. Na izany aza, tsy miseho ireo teny ireo (ao amin'ny zavon-teny). Ohatra, tsy misy ny lohahevitra mifandraika amin'ny faritra an-drenivohitra sy ny faritra voaaro , misy ny fanononana faritra, saingy tsy toy ny lohahevitra manokana.
Ao anatin'ny andiany Rising Frames izay nokarakaraina niaraka tamin'ny fiaraha-miasa akaiky tamin'ny fikambanana El Churo any Quito, Ekoadaoro ny lahatsoratra. Nikarakara atrikasa ry zareo tamin'ny 21 aprily 2018 ary namory solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa mba handinihana ny fomba hanehoana azy ireo na ny olana izay atrehany ao amin'ny angona media Ekoadaoreana sy ny famoronana tantara ho setrin'izany.
Nanampy tamin'ny dika an-tsoratra sy ny fandikan-teny ny lahatsoratra izay nasiana fanitsiana mba hazava kokoa sy ho fohy kokoa i Mónica Bonilla sy i Belén Febres-Cordero.